WordPress: Jetpack स्थापना गर्नुहोस् र होभरकार्ड सक्षम गर्नुहोस् Martech Zone
WordPress: स्थापना गर्नुहोस् jetpack र होभरकार्ड सक्षम गर्नुहोस्
मंगलवार, अगस्त 30, 2011 बुधबार, अक्टोबर 26, 2011 Douglas Karr
पहिलो कुराहरु पहिले तपाई संग एक खाता छ Gravatar.com? अब एक सेट अप गर्नुहोस् र आफ्नो सार्वजनिक प्रोफाइल सक्षम गर्नुहोस्। तपाइँको सामाजिक नेटवर्क, एक विवरण, र केहि चित्रहरु जोड्नुहोस्। किन?
ग्र्यावाटरको सर्वव्यापी तपाईको फोटो प्रदर्शन गर्न प्रयोग गरिन्छ जहाँ तपाईले कहिले रेजिष्टर गर्नुहुन्छ वा कुनै टिप्पणी र तपाइँको ईमेल ठेगाना छोड्नुहुन्छ। चिन्ता नलिनुहोस् - ती चोरी गर्दैनन् वा तपाईंको ईमेल ठेगाना प्रदर्शन गर्दैनन्, उनीहरूले ह्यास कुञ्जी सिर्जना गर्दछ ... र त्यो ह्यास कुञ्जी तपाईंको फोटोको लागि फाइल नाम हो। यो एक राम्रो सुरक्षित प्रणाली हो। Gravatars धेरै समय को लागी गरीएको छ - तर अब तपाई Gravatar.com मा एक पूरा सामाजिक प्रोफाइल सेट अप गर्न सक्नुहुनेछ। र, Gravatar सार्वजनिक प्रोफाइल सक्षम गरीरहेको छ, मा धारिलो मानिसहरू Automattic (WordPress को निर्माताहरु) व्यस्त रहे।
तपाईंले आफ्नो वर्डप्रेस प्रशासकीय प्यानेलमा याद गर्नुभयो जुन तपाईं अब सक्षम गर्न सक्नुहुन्छ jetpack WordPress मा। यो वर्डप्रेसको लागि उत्कृष्ट एड-अनहरूको श्रृंखला हो जुन उच्च उपयोगको लागि अनुकूलित गरिएको छ र क्लाउडमा होस्ट गरिएको छ। त्यस्तै एउटा सुविधा हो होभरकार्ड। यदि एक साइटले होभरकार्डहरू सक्षम गर्दछ (तपाईं वास्तवमै एक WordPress साइट हुनुपर्दैन), तपाईं कुनै पनि gravatar माउसओवर गर्न सक्नुहुन्छ र यसले तपाईंको प्रोफाइल प्रदर्शन गर्दछ। यो हाम्रो विषयवस्तुको साथ उत्कृष्ट काम गरीरहेछ:
होभरकार्डहरू गत अक्टुबरदेखि यता भएका छन्, तर वास्तवमै अब लोकप्रिय भइरहेका छन् jetpack समातिरहेको छ। केवल एक छवि माउसओभर गर्नुहोस्, र तपाईं स्वचालित रूपमा त्यस प्रयोगकर्ताको प्रोफाइल पाउनुहुनेछ! राम्रो! यदि तपाईंसँग वर्डप्रेस साइट छैन भने, तपाईं अझै पनि Gravatars (सरल PHP प्रकार्य) र होभरकार्ड (jQuery प्लस एक होभरकार्ड स्क्रिप्ट) प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ।
TweetTwo: सही सन्देश, सहि समय, सहि स्थान
एक पर्सोना विकास मूर्तिकला हो, कास्टि not होइन
अगस्ट 30, 2011 बेलुका 6:39 बजे
उत्कृष्ट उदाहरण छवि!
अगस्ट 30, 2011 बेलुका 6:40 बजे
हम्म, विडम्बनापूर्ण रूपमा, डग, तपाईंको तस्बिरले पप-अप हुन लागेको जस्तो सीमा देखाउँछ तर विवरणहरू कहिल्यै देखाउँदैन र अनिश्चित रूपमा स्पिनर देखाउँछ। जब मैले यसमा क्लिक गरें, Gravatar भन्छ प्रयोगकर्ता फेला परेन। तपाइँको साइटमा केहि अन्य ब्लगरहरूले काम गर्छन्, यद्यपि, त्यसैले म तपाइँको Gravatar मा केहि गलत छ भन्ने मान्छु।
अगस्ट 31, 2011 मा 12: 56 AM
किन मलाई यसरी बोलाइरहनुभएको छ, टोल्गा? 😉 मलाई थाहा छ - मलाई लाग्छ कि यसले म प्रशासक हुनुको साथ केहि गर्न सक्छ किनभने यसले अन्य प्रशासकहरूसँग पनि गर्छ। म यसमा काम गर्दैछु... तपाईंले ध्यान दिनु पर्ने थिएन!
सेप्टेम्बर 1, 2011 मा 4: 44 AM
निश्चित टोल्गा! मैले Gravatar मा मार्केटिङ टेक ब्लगको लागि प्रयोग गरिरहेको इमेल ठेगाना थपेको थिइनँ भन्ने थाहा पाएँ। उफ्!